Nge-8 ka-Okthobha i-Zodiac-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope - Imiqondiso Yeenkwenkwezi
Eyona Imiqondiso Yeenkwenkwezi Nge-Okthobha i-8 Zodiac yiLibra-Ubuntu obuGcweleyo beHoroscope
Nge-Okthobha i-8 Zodiac yiLibra-Ubuntu obuGcweleyo beHoroscope
Umqondiso we-zodiac ka-Okthobha u-8 yiLibra.
Uphawu lweenkwenkwezi: Izikali . Olu phawu lumele abo bazalwe ngoSeptemba 23-Okthobha 21, xa iLanga lihambisa uphawu lweLibra zodiac. Imele uzinzo ngokusebenza nzima, ubutyebi, indalo elungeleleneyo kunye nengqondo yomthetho.
Inkqubo ye- ILibra Constellation ilele phakathi kweVirgo ukuya eNtshona kunye neScorpio ukuya eMpuma kwindawo engama-538 sq degrees kwaye ayinazinkwenkwezi zokuqala. Ububanzi bayo obubonakalayo buphakathi kwama-65 ° ukuya -90 °, le yenye yeenkwenkwezi ezilishumi elinambini ze-zodiac.
Igama Libra yingcaciso yesiLatin yamaNqanaba, uphawu lwe-zodiac ye-8 ka-Okthobha. AmaTaliyane ayibiza ngokuba yiBilancia ngelixa iSpanish isithi yiLibra.
7/11 uphawu lweenkwenkwezi
Uphawu olwahlukileyo: IiAries. Oku kuthetha ukuba lo mqondiso kunye nomqondiso welanga weLibra kubudlelwane obudibeneyo, ucebisa ubushushu kunye nokuzonwabisa kunye nokuba yintoni enye engenayo kunye nenye indlela ejikeleze.
wazi njani ukuba indoda gemini inomdla
Isimo sokuziphatha: Ikhadinali. Le modality yabo bazalwe ngo-Okthobha u-8 iphakamisa ukungxamiseka kunye nothando kunye nokubonelela ngemeko yolawulo lwabo.
Indlu elawulayo: Indlu yesixhenxe . Le ndlu ilawula intsebenziswano, ezimeleyo kwindalo. Oku kuchaza ukubaluleka kweLibra nganye ekuthatheni inkampani yabantu kuphela abanokunika inkxaso eyoneleyo yokufezekiswa kwabo okuyinyani.
Umzimba olawulayo: UVenus . Iplanethi yethu ibonisa ukuzonwabisa kunye nobukroti kwaye ikwacebisa imeko yolungelelwaniso. UVenus uyahambelana no-Aphrodite, uthixokazi wothando kwiintsomi zamaGrike.
Isiqalelo: Umoya . Le nto imele amandla kunye nezinto ezintsha kwaye ithathwa njengeyinempembelelo kubantu abakrelekrele nabayilayo abazalwe ngo-Okthobha 8. Umoya wenza izinto zishushu ngokuhlangana nomlilo, umphunga wamanzi kwaye uziva uxinekile ngokudibeneyo nomhlaba.
Usuku lwethamsanqa: uLwesithathu . Ngaphantsi kolawulo lweMercury, olu suku lungumqondiso wokuqonda kunye nokuthathela ingqalelo. Kuyacetyiswa ngabantu baseLibra abanobuhlobo.
Amanani anethamsanqa: 5, 7, 13, 18, 27.
aries man sagittarius umfazi umtshato
Ulwazi oluthe kratya ngo-Okthobha i-8 Zodiac engezantsi ▼
Uyitsala njani indoda eyiVirgo: Iingcebiso eziPhambili zokuMenza awele Ethandweni
umfazi we-scorpio kunye ne-scorpio bathanda ukungqinelana
Uphawu lweZodiac ngo-Okthobha 8
loluphi uphawu lwe-zodiac ngoJuni 1
loluphi uphawu lwe-zodiac ngumatshi wama-25
Umfazi we-aquarius uthandana nendoda eyi-aries